Products – Tagged "Promotion" – ICT.com.mm
WeGuard Air Purifier LYL-KQXDJ-06K296,400 K266,800-10%
Samsung Twin Tub Washing Machine (11 Kg) WT11T4200LG/STK375,600 K359,500-5%
Samsung Fully Auto Top Load Washing Machine (7.5Kg) WA75H4000SG/STK380,900 K364,900-5%
Samsung Fully Auto Top Load Washing Machine, Digital Inverter (11Kg) WA11T5260BY/STK532,900 K511,500-5%
Samsung Fully Auto Top Load Washing Machine, Digital Inverter (10Kg) WA10T5260BY/STK492,200 K470,800-5%
WeGuard Air Purifier LYL-KQXDJ-06
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: LYL-KQXDJ-06 Power: 80W Voltage: 220V/50HZ Air Volume: 500 m³/H Wind Speed Adjustment: gear 1-2-3-4 Ultraviolet wavelength: 253.7nm Timing: 1-8H Control Type: Remote Control The noise:...
Samsung Twin Tub Washing Machine (11 Kg) WT11T4200LG/ST
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Washing Capacity: 11 Kg Spin Speed: 700 rpm Air Turbo EZ Wash Tray Magic Filter Magic Mixer Body color: Light Gray Additional Cycle: Wash Selector : Heavy/Normal/Delicate, Drain...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Washing Capacity: 10 Kg Spin Speed: 700 rpm Pulsator: Double Storm Drum Type: Diamond Drum Eco Tube Clean Water Level:5EA Body color: Gray Panel Display:...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Washing Capacity: 11 Kg Spin Speed: 700 rpm Body color: Lavender Gray Drum type: 2nd Diamond drum Door: Black Net Dimension (WxHxD): 610 x 1075 x 675 mm Net Weight:...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Washing Capacity: 10 Kg Spin Speed: 700 rpm Body color: Lavender Gray Drum type: 2nd Diamond drum Door: Black Net Dimension (WxHxD): 610 x 1075 x 675 mm Net Weight:...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Washing Capacity: 13 Kg Spin Speed: 700 rpm Body color: Lavender Gray Drum type: 2nd Diamond drum Door: Black Net Dimension (WxHxD): 610 x 1105 x 675 mm Net Weight:...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ All Around Cooling Digital Inverter Deodorizing Filter Moist Fresh Zone Always working, always dependable The new Samsung refrigerator’s smart and durable technology ensures long-lasting performance. Digital Inverter...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Washing Capacity: 10 Kg Spin Speed: 1400 rpm AddWash Bubble technology Q-rator Body color: White Door: Crystal Gloss Panel Display: LED Net Dimension (WxHxD): 600x850x600 mm Net Weight:...
Samsung 2020 Series 32-Inch HD LED Smart TV UA32T4300AKXMR (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Screen Size: 32-inch HD LED Resolution: 1366 × 768 Design: Mold Bezel Type: VNB Picture Engine: Hyper Real Motion Rate: 50 HDR (High Dynamic Range): Yes PQI...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Works longer more quietly Uses less energy Clearly see everything inside Works longer more quietly & uses less energy Digital Inverter Technology automatically adjusts the compressor speed...
Samsung Front Load Washing Machine (8Kg) Wash & Dry WD80J6410AW/ST
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Washing Capacity: 8 Kg Drying Capacity:6Kg Spin Speed: 1400 rpm Bubble technology Body color: White Door: Crystal Blue Panel Display: LED Net Dimension (WxHxD): 600x850x600 mm...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Screen Size: 55-inch 4K QLED Resolution: 3840 × 2160 Design: New Bezel-less Bezel Type:3Bezel-less Picture Engine: Quantum Processor Lite HDR (High Dynamic Range): Quantum HDR...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Digital Inverter Compressor Moist Fresh Zone Easy Slide Always working, always dependable The new Samsung refrigerator’s smart and durable technology ensures long-lasting performance. Digital Inverter Compressor and...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Screen Size: 65-inch 4K QLED Resolution: 3840 × 2160 Design: New Bezel-less Bezel Type:3Bezel-less Picture Engine: Quantum Processor Lite HDR (High Dynamic Range): Quantum HDR...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Washing Capacity: 10 Kg Drying Capacity:7Kg Spin Speed: 1400 rpm Bubble technology AddWash: Yes Q-rator Body color: Inox Door: Crystal Gloss Panel Display: LED Net...
Midea MBFS-5018D Rice Cooker
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Midea Product Name: Digital Rice Cooker Model: MBFS-5018D Warranty: 1 Year Full Replacement Capacity: 1.8L Display: LCD Control: Button Pot: 1.7mm/Non-stick Voltage: 220-240V / 50-60 Hz...